I-Raw Estradiol Benzoate powder (50-50-0) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / Estradiol Benzoate powder
Akukho kalo SKU: 50-50-0. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwinqanaba le-Estradiol Benzoate powder (50-50-0), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Ukusetyenziswa kwezokwelapha kwe-estradiol benzoate kufana neye-estradiol kunye nezinye i-estrogens. Umzekelo wesalathiso kwilisi ye-hormone yonyango yokutshintshwa kweempawu ze-menopausal okanye u-hypoestrogenism.
Estradiol Benzoate powder ividiyo
I-Raw Estradiol Benzoate powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Estradiol Benzoate
I-molecular Formula: C25H28O3
Isisindo somzimba: 376.488
Ukusetyenziswa kwe-Raw Estradiol Benzoate kwipiliti ye-steroids
I-Estradiol benzoate (i-CAS 50-50-0) (i-EB, i-E2B) (i-INN) (igama lophawu lwegama elithi Progynon-B, nabanye abaninzi), okanye i-oestradiol benzoate (BAN), i-estrogen esterogen kunye ne-estrogen ester.
Usetyenziso lwe-Raw Estradiol Benzoate
Inqanaba elilodwa le-2.5 mg estradiol benzoate ngejoyi yeesram efunyenwe ukuvelisa amazinga e-plasma estradiol> 400 pg / mL, i-24 iiyure ze-post injection, kwiqela lezigulane ezinezinga elisezantsi elise-estradiol.
Isixwayiso kwi-Raw Estradiol Benzoate powder
Iziphumo zecala ye-estradiol benzoate zifana nezo-estradiol. Imizekelo yeziphumo ezichaphazelekayo zibandakanya ukunyamezela isifuba kunye nokwandiswa, isicupunu, ukubhubhisa, i-edema, intloko, kunye ne-melasma.
I-Esters ye-estradiol efana ne-estradiol benzoate i-hydroxyzed prodrugs ye-estradiol, kodwa ibe nexesha elongezelelweyo xa ilawulwa ngeoli nge-injection ye-intramuscular ngenxa yesiphumo se-depot esinikwe ngamaqumrhu abo ase-fatty acid ester. Njengama-prodrugs ye-estradiol, i-estradiol benzoate kunye nezinye i-estradiol esters zi-estrogens.
I-Estradiol Benzoate Powder (i-CAS 50-50-0)
I-Raw Estradiol Benzoate yokuPhengisa
Indlela yokuthenga i-Estradiol Benzoate powder (i-CAS 50-50-0) esuka kwi-AASraw